PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-20 - Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-20 - IZIMVO -
Eyona nto ibalulekile namhlanje kukuba wenze izicwangciso zempelaveki. Kukho ithuba lokuba ungafumana isimemo kumcimbi obalulekileyo kwikhaya lomhlobo wakho wenene.
Awuzukwazi ukugqiba iprojekthi ekumele uyigqibe, ngenxa yokuphazamiseka okungalindelekanga. Musa ukuchitha ixesha lakho ugxile kule loo nto, yamkela okwenzekayo ngaphandle komsindo.
Uza kuba novuyo nakuba uziva ukhathazekile ngenxa yento engekenzeki. Xa ugxila ekubeni uzive ngolu hlobo, ungangakwazi ukufikelela kwimpumelelo enkulu emsebenzini wakho.
Kukho ithuba lokuba osondeleyo kuwe uza kukwenza okungaqhelekanga. Ixesha ngokwalo liza kubeka izinto endaweni yazo, ngako oko musa ukuchitha amandla akho ngempindezelo okanye inkxalabo.
Akukho nto ihambela phambili namhlanje ngenxa yendlela eyingxaki oziva ngayo. Kukho ithuba lokuba usapho lungangunobangela wezi ngxaki. Intle ke into yokuba ngeli thuba ayikho enye ingxaki onayo ebomini ngaphandle kwale.
Uzimisele ukuthabatha umngcipheko kumba odibene nezothando. Utshintsho olukhulu alukadingeki kwicala lemali nakwimiba edibanisa nomsebenzi. Likhona ithemba lokuba iimbono ezintsha zingabangela ukukhula kwezoshishino.
Musa ukwenza izithembiso ngolu suku lwanamhlanje. Phambi kokuba nabani na acele okuthile kuwe, qwalasela amandla abo. Ungehlelwa yingozi nje encinance, ngako oko dlalela kude kwindawo yokudada.
Imo yezulu embi yiyo kuphela ingxaki yolu suku kuwe, nto leyo iza kukunqanda ukunxiba okuthandwa nguwe. Ukanti usuku nje ngokubanzi luthembisa ukuba neziphumo ezihle. Kukho nethuba lokufezekisa iprojekthi yezoshishino ngempumelelo.